कोरोनाभाइरस ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी’को अवस्था होइन : डब्लुएचओ, कस्तोमा गरिन्छ घोषणा ? – Health Post Nepal
कोरोनाभाइरस ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी’को अवस्था होइन : डब्लुएचओ, कस्तोमा गरिन्छ घोषणा ?
२०७६ माघ १० गते १६:५७
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोनाभाइरसको संक्रमण वैश्विक स्वास्थ्य आपत्काल घोषणाको अवस्थामा नभएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपत्काल समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी’ घोषणा गर्ने–नगर्ने विषयमा मत बाझिएको थियो । समितिले ठोस निर्णय दिन नसकेपछि डब्लुएचओले चीनबाहेकका देशमा संक्रमितको संख्या नगण्य हुनुका साथै मानिसबाट मानिसमा संक्रमण भएको नपाइएकाले वैश्विक आपत्काल घोषणा गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यद्यपि, चीनमा भने राष्ट्रिय आपत्कालको आवस्था रहेको डब्लुएचओले जनाएको छ ।
‘यतिवेलासम्म चीनबाहिर मानिसबाट मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छैन,’ डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले जेनेभामा प्रत्रकारसम्मेलनमा भने, ‘यसको अर्थ हुँदैन भन्नेचाहिँ होइन ।’
अझै पनि कोरोनाभाइरसलाई चीनमै मात्र सीमित गरेर नियन्त्रणमा लिन सकिने जनाउँदै उनले कुनै गल्ती नगर्न आग्रह गरे । ‘कुनै गल्ती नगर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘यो चीनमा आपत्काल हो, तर अहिलेसम्म वैश्विक स्वास्थ्य आपत्काल बनिसकेको छैन, अझै पनि त्यहीँ सीमित बन्न सक्छ ।’
४ साताअघि चीनको युहान राज्यबाट देखापरेको नयाँ भाइरसले अहिलेसम्म २५ जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने फैलिने क्रम जारी छ । चिनियाँ अधिकारीका अनुसार करिब ८ सयमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यद्यपि, चीनले भाइरस संक्रमणको वास्तविक तस्बिर बाहिर नल्याएको आरोप लगाउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू चीनमा करिब २ हजारमा संक्रमण भइसकेको दबी गर्छन् ।
मानिसबाट मानिसमा सर्ने यो भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि चीन सरकारले युवान राज्यलाई बन्द गरेको छ । हुवानबाट छुट्ने विमान, रेल, बस, डुंगामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सहरवासीलाई अन्यन्त जरुरी नपरी घरबाट ननिस्कन भनिएको छ भने सहर छोड्न रोक लागाइएको छ ।
चीनबाहेक संयुक्तराज्य अमेरिकासहित करिब आधा दर्जन देशमा संक्रमित भेटिएका छन् । ती देशमा पनि युहान गएर आएका व्यक्तिमै संक्रमण पाइएको र अन्य मानिसमा नसरेकाले वैश्विक समस्या नबनिसकेको डब्लुएचओको ठहर छ ।
जम्मा ५ पटक गरियो ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी’ घोषणा, कहिले र किन ?
डब्लुएचओले हालसम्म ५ पटक ‘ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी’ घोषणा गरेको छ ।
– सन् २००९ मा पहिलोपटक ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरिएको थियो । त्यतिवेला इन्फ्लुएन्जाको महामारी फैलिएको थियो ।
– सन् २०१४ मा दुईपटक ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरियो । त्यतिवेला कैयौँ देशमा पोलियोको पुनरुत्थान भएको थियो । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजेरियालगायत देशमा पोलियो खतराको अवस्थामा देखिएको थियो ।
त्यसै वर्ष पश्चिमी अफ्रिकामा इबोलाको महामारी फैलिएपछि दोस्रोपटक ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरियो ।
– सन् २०१६ मा जिका भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरिएको थियो ।
– सन् २०१९ मा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा इबोलाले प्रकोपको रूप धारण गरेपछि ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरियो ।
चीनमा रहेका नेपालीलाई सावधानी अपनाउन दूतावासको आग्रह
चीनस्थित नेपाली दूतावासले चीनमा रहेका नेपालीलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बच्न सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । दूतावासले बिहीबार सूचना जारी गर्दै चीनमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सावधानी अपनाउन अपिल गरेको हो ।
दूतावासले भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने तरिकासमेत बताएको छ । सावधानीका उपाय अपनाउँदै चीन सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने सूचनाहरु लिइरहन भनेको छ । सहयोग आवश्यक परेको खण्डमा दूतावास तथा विभिन्न सहरमा रहेका नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा सम्पर्क गर्न दूतावासले आग्रह गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)